Ka fogow Abka Dukaanka "Ku dar Shaashadda Guriga" | Martech Zone
Ka fogow App Store oo leh "Kudar Shaashadda Guriga"
Jimco, Juun 22, 2011 Sabtida, Janaayo 23, 2021 Nick Carter
Waan ogahay inaan u maleynayo inaan waxyar ku qaban karo tan, laakiin ma ihi taageere Mac ah. Waayahay, waan iska cadahay inaanan u adkaysan karin. Farta ma saari karo sababta, laakiin halkan waa bilow: si aad ugu horumariso App ku saabsan iPhone-ka sumcadda leh, waa inaad ku horumarisaa oo keliya barnaamijka 'Mac' ee leh barnaamijka 'Mac' oo ah maalgelin ka badan $ 2,000.
Si kastaba ha noqotee, IPhone waa suuq-beddele iyo suuq-geyn suuqeed oo ganacsatadu ay tahay inay wax ka qabtaan.
Marka, waxaad dooneysaa faa'iidooyinka marin u helka App-ka oo kale, laakiin ma dooneysid qarashka (ama guuritaanka qasabka ah ee loogu talagay barnaamijka 'Mac'), ama macquul ahaan inaadan rabin inaad barato luuqad koodh cusub ah.
Waxaad sifiican uguqabatay barnaamijyada barnaamijyada boggaga, ku raaxee dhamaan faa iidooyinka daruuraha martigelinta, markaa maxaad hadda u dhiseysaa codsi macaamil Gaar ahaan haddii aadan si weyn u xiiseyneynin soo-bandhigista App Store-dadku waxay ka heli doonaan dalabkaaga dadaalka suuq-geyntaada, waxaad kaliya u baahan tahay inaad siiso iyaga hal-tubbada dhaqanka helitaanka degdegga ah. Waxaad ubaahantahay barnaamij-been abuur ah.
Ku dar Shaashadda Guriga
War wanaagsan. IPhone-ku waxay leeyihiin awood lagu dhisay si ay u taageeraan shaqada noocaas ah. Looma baahna Mac. Looma baahna barnaamij labaad oo loogu talagalay arjiga macaamiisha. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa:
Degel loo qaabeeyey ama ka jawaabaya 320px ballaaran.
Tani Xarafka koodhka iyo sawirro
An tufaax taabashada (png)
Marka hore, muxuu koodhkani ku samaynayaa maamulaha dugsiga?
Koodhka faylka la siibay ee kor ku xusan waxaa loogu talagalay wax baro isticmaalaha ku jira talaabooyinka saxda ah ee ay u baahan yihiin inay qaadaan, isagoo si caqli gal ah u baraya shaqooyinka iPhone-ka ee u dhashay ee horeyba u heli karay iyaga oo ka dhigaya boggaaga mid la heli karo sida App kale. Ta labaad, waxay leedahay talaabooyin loo dhisay si taasi kaliya uga muuqato iPhones IYO waxay u saamaxdaa isticmaalaha inuu xiro jawaabta, oo uusan dib dambe u arkin muddo 6 bilood ah, taas oo markaa dib loo xasuusin doono.
Hadda, qeybta geeky: sidee baan u rakibaa?
Badbaadi tufaax-taabasho-icon.png faylka galka galka ee shabakadaada kuna tixraac adiga oo ku habboon> xiriiriyaha> ku calaamadee madaxa.
Ku dheji sawirada laga helay feylka zipka (kore) galka galka / muuqaalada /
Ku dhaji koodhka faylka qoraalka ee laga helay faylka faylka (kor ku xusan) wax yar uun ka hor sumadda jirka ee boggaaga (yada)
Taasi waa taas. Haddii aad raacdo talaabooyinkan, waa inaad aragtaa jawaab deg deg ah oo ka muuqaneysa iPhone-kaaga oo tilmaameysa isticmaaleha astaanta toobiye ee biraawsarkooda Safari kuna amraya inay Ku dar Shaashadda Guriga marin hal-tubbo ah sida barnaamijyadooda kale oo dhan.
Hadda, arjigaaga shabakadda waxaa lagu calaamadeyn doonaa astaan ​​ku taal shaashadda iPhone-ka. Muuqaal ahaan iyo fudayd-u-helitaan, waxay leedahay dhammaan waxtarka App-ka u gaarka ah iyada oo aan kharash ama dhib ku jirin.
Tags: codsiga ballantanuxurka waxbarashadaEpicoremaylka ku saleysan rukhsaddashirqool
Nick Carter runti waa ganacsade qalbiga ku jira. Isagu waa qoraaga Lacag la'aan, iyo sidoo kale aasaasaha AddressTwo, a ganacsiga yaryar Software CRM kaas oo ganacsatada siiya qalab iyo habab ay ku maareeyaan iibintooda isla markaana si otomaatig ah u suuq geynayaan.
“Kee” Ayaa Ka Shaqeeya Sida Ugu Fiican Ee Loo Xidho Hogaaminta?
Video: Tiknoolajiyadda Emailvision iyo Kobaca
Jul 22, 2011 markay tahay 5:05 PM
Farriin weyn. Tani waa waxa aan ku sameynay http://maps.wbu.com - sidoo kale waxaad ka heli doontaa xoogaa hacks halkaas ah oo tirtiraya cinwaanka cinwaanka cinwaanka iyo arrimaha ku saabsan daabacaadda kuwan! Waxaan ku raacsanahay in tani ay tahay xalka aad uga wanaagsan ka shaqeynta barnaamijka App Store. Iyo… maaddaama ay jiraan aalado aad u tiro badan goobta, qorista barnaamijka khadka tooska ah ayaa si fudud loogu qaadi karaa barmaamijyada kale.